२०७४–चुनाव – Page5– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा स्वास्थ्य माफियालाई कारवाही गर्ने चेतावनी
वैशाख २५ काठमान्डौ । अखिल (क्रान्तिकारी) जसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेका निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ र वर्तमानमा पनि कोभिड–१९ को खोप आउन नसक्नुमा ओली सरकारले स्वास्थ्य माफियाहरुलाई संरक्षण गर्नुका साथै स्वयं सरकार नै माफियाको जालोमा फस्न पुग्नु हो । कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा ओम्नीजस्ता स्वास्थ्य माफियाहरुको हितमा काम गरेको […]
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का प्रवक्ता प्रतीकद्वारा सरकारको जनविरोधी स्वास्थ्य नीति र मेडिकल माफियाको कालोबजारीका विरुद्ध आवाज उठाउन सबैमा आव्हान गर्दै प्रेस वक्तव्य प्रकाशित
वैशाख २५ काठमान्डौ । कोभिड–१९को दोस्रो लहरका कारण कोरोना सङ्क्रमण सरकारको लापर्वाहीका कारण नियन्त्रण बाहिर गएको छ, । सङ्क्रमितहरु अस्पतालका चिसो छिंडीमा अक्सिजन नपाएर छट्पटाइरहेका छन् र लासहरु सडकमा अलपत्र छिरलिएका छन् । यो अवस्था भनेको सरकारको लापर्वाही नै हो । यस्तो अवस्थामा जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्दै सरकारले जनताको नि:शुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा मात्र […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, Feature News, Flash
नेपालमा किन क्रान्ति सफल हुदैन ?
विश्वमा कुनै पनि क्रान्ति एउटा खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएका हुन्छन् । क्रान्ति सफल भए पश्चात देशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, सांस्कृतिक समग्र पक्षलाई समेटेर राज्य सञ्चालन गर्ने र सोहि अनुसारको ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका बनाइन्छन् र लागू गरिन्छन् । यी सबै विषय प्राप्तिका लागि सबभन्दा पहिला कानूनी राज्य वा विधिको शासन […]
निषेधाज्ञाको घोषणा गर्ने जिल्ला ६० पुगे
काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर व्यापक रुपमा बढ्दै जान थालेपछि देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा घाेषणा गरिएकाे छ । शुक्रबारसम्म निषेधाज्ञा घाेषणा गर्ने जिल्लाहरु ६० पुगेका छन् । नयाँ भेरियन्टको कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले भारतीय सिमानासँग जोडिएको बाँके जिल्लामा संक्रमणदर बढेपछि बाँकेबाट सुरु भएकाे निषेधाज्ञा अहिले देशका अधिकांश जिल्लासम्म पुग्काे छ । महामारी […]
मेडिकल माफियाको कब्जामा ओली सरकार, निःशुल्क लगाउन सकिने खोप निजी कम्पनीलाई चार गुणा महंगोमा बेच्ने अनुमति
काठमाडौं । ओली सरकार मेडिकल माफियाको कब्जामा परेका केही दृष्टान्तहरु सामुन्नेमा आएका छन् । सरकारले खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कम्पनी हुकमलाई पुरस्कृत गर्दै चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको छ  । तर, सोही मूल्यमा आउने भए पनि चिनियाँ खोपलाई भने सरकारले अनुमति दिएको छैन । सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ […]
‘बिचौलिया भूतप्रेत जागेका कारण’ भारतबाट खोप ल्याउन सकिएन : स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी
बैशाख २३ काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ‘बिचौलिया भूतप्रेत जागेका कारण’ भारतबाट खोप ल्याउन नसकिएको बताएका छन् । हिमालखबर पत्रिकालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भुतप्रेतहरु जागेर कमिसन मागेपछि खोप ल्याउन बाधा परेको बताए । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट ५० लाख डोज खोज खरिद गर्ने समझदारी भइसकेका बेला बिचौलिया भुतप्रेतहरु जागेर १० प्रतिशत […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Feature News, Flash
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा संसद सचिवालयका उपसचिव कृष्णराज खनालको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बिहान अस्पताल कलंकीस्थित शहिद ममोरियल अस्पताल लैजाने क्रममा उनको मृत्यु भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बुधबार गरिएको परीक्षणमा चार सांसद र सचिवालयका तीन कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमण पुष्टि भएपछि चन्द्रागिरी–१२ स्थित घरमै आइसोलेसनमा बसेका […]
सत्ता लिप्सामा रुमलिन्दै वर्तमान सरकार
आखिर सही बिचार कहाँबाट आउँछ ? के आकाशबाट फुत्त झर्छ ? अहँ त्यस्तो हुँदैन । के त्यो धर्तिबाट सुटुक्क पलाउँछ ? अहँ, त्यसरी पनि पलाउँदैन । के त्यो हाम्रो दिमागमा आफसेआफ पैदा हुन्छ ? अहँ त्यस्तो पनि हुँदैन । सही बिचार त सामाजिक व्यवहारबाट पैदा हुन्छ । सामाजिक व्यवहार नै सही बिचारको निर्बिकल्प मूहान हो […]
संसदीय व्यवस्थाको नौटंकी र नयाँ विकल्प
अहिले नेपालमा जुन संविधान कायम छ, त्यो जारि भएको पनि पुगनपुग ६ वर्ष हुुन लागे छ । एउटा व्यवस्थाले राष्ट्र र जनताका निमित्त के गर्न सक्छ भन्ने संकेत दिनका लागि यो समय अवधि कम होइन । ६ वर्षको अवधिमा कैयौ. राष्ट्रहरुमा जनताले राम्रो सँग अनुभूत गर्न सक्ने गरी, जनताका दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने […]